Japana: Lavin’ilay “Mpanakanton’ny Làlan-jaza” Ireo Fiampangana Azy Ho Vetaveta Fisaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2015 3:13 GMT
Megumi Igarashi, 24 Jolay 2014, dikasary YouTube
Milaza i Megumi Igarashi, Japoney mpanakanto, nomen'ireo media Tandrefana ny solonanarana “The Vagina Artist” – na Mpanakanton'ny Lalan-jaza, fa tsy misy zava-betaveta mihitsy raha ny momba ny taokanto mifototra amin'ny taovam-pananahany.
Fisehoana voalohan'i (Megumi Igarashi) teo amin'ny fitsarana, manambara izy tenany fa tsy meloka amin'ny fiampangana azy ho manao zava-betaveta. （´-`）.｡oO (Izaho koa aza mba tena faly fa hain'ilay mpanao kisary ao amin'ny fitsarana tsara mihitsy ny naneho azy. ー(^o^)
Nosamborin'ny Polisy an-tànan-dehibe ao Tokyo i Igarashi tamin'ny Jolay 2014 tamin'ny filazana azy ho nandefa mailaka fangataham-bola ho fanohanana ireo rohin'ny tetikasan-javakantony mankany aminà tranonkala iray, izay azon'ireo olona ireo hitrohana angon-drakitra manana endrika 3D azo ampiasaina hamoronana kayaks miendrika molotry ny fivaviana nalaina tàhaka tamin'ny taovam-pananahany.
Volana maro taty aoriana, nosamborina indray i Igarashi noho ny namoahany tany aminà trano fivarotana fitaovana fampiasa amin'ny resaka filan'ny nofo tao Tokyo ny taokanto iray hafa nalaina tàhaka avy amin'ny taovam-pananahany—tranga iray mazava amin'ny filam-baniny ataon'ny polisy, raha ny filazan'ny mpisolovava azy.
Volana maro talohan'ny nisamborana azy tamin'ny Jolay 2014, Igarashi, izay mampiasa ihany koa ny solonanarana ‘Rokudenashiko” ( ろくでなし子 na “sipa tsy aninon-tsy aninona”), dia nahazo laza tamin'ny namoronany sy nampisehoany karazana taokanto isan-karazany nalaina tàhaka avy amin'ny taovam-pananahany.
Megumi Igarashi, antsoina koa hoe Rokudenaishiko, no ilay mpanakanto ao Tokyo ampangaina ho manao resa-betaveta. Ndeha isika hijery vitsivitsy amin'ireo taokantony.
Ao Japana, araka ny Artikla 175 ao amin'ny lalàna famaizana, tsy manara-dalàna izay media mampiseho taovam-pananahan'ny lehilahy na vehivavy. Efa tany amin'ny Vanim-potoana Meiji no nisy ilay fandraràna, fony i Japana naka ireo andrim-panjakana sy fomba fanaon'ny Tandrefana tany amin'ny tapany faran'ny taonjato faha-19.
Ny mahagaga, ny Artikla 175 tsy manome taridàlana mazava ho an'ny polisy sy ny fitsarana momba izay mandrafitra ny atao hoe vetaveta amin'ireny tranga ireny :
…Tsy misy andalana iray ao anatin'ilay artikla mamaritra ny teny hoe ‘vetaveta’ sy “na ireo mpitantana ao amin'ny governemanta na ny ao amin'ny fitsarana samy tsy voafatotry ny lalàna mba hitondra famaritana mazava tsara ny hoe inona no mandrafitra ny “zava-betaveta“. Tsy dia mahagaga hoe betsaka ny fandikàna io artikla io no nomena arakaraky ny fampiharana azy. Raha ny zavatra natao hojeren'ny maso no raisintsika, toy ny manga sy ny sarimihetsika, faritan'io lalàna io ho zava-betaveta ny fampisehoana volon'ny elakelam-pe, ny taovam-pananahan'ny olon-dehibe ary ny fihetsika rehefa manao firaisana ara-nofo. Araka izany, raha mitranga izany, tokony hoafenina izay faritra rehetra mety ho hitan'ny maso amin'izay antsoin'ny ao Japana hoe bokashi (manjavozavo na setrohana) na aminà kiefitrefitra dizitaly. Io famaritana faran'izay tsy mazava momba ny resaka vetaveta io no niteraka zavatra hafahafa maro any anatin'ny didim-pitsarana, izay ivon'ireo adihevitra amin'izao fotoana izao momba ny fahalalahana maneho hevitra.
Manana fadifady matanjaka be ihany koa ny kolontsaina Japoney raha vao resaka na fanekena ny làlan-jaza (na ny fahitalavitra Metropolis any Holland aza, izay namoaka ny rakitsary fampahafantarana etsy ambany, dia tsy nanisy olana mihitsy tamin'ny fampiasana ny teny hoe “Sambo Fory” ho famaritana ilay kayak miendrika lalan-jaza an'i Igarashi):
Raha voaheloka, roa taona an-tranomazina no ho atrehan'i Igarashi miampy onitra hatramin'ny 2,5 tapitrisa yen (20.900 dolara amerikana).